China Eva textilene phumula isihlalo Ukukhiqiza kanye Factory |I-Tailong
Eva textilene phumula isihlalo
Dizayina ngobulula bomumo othi “X”, obuhambisana nendwangu ethambile yesihlilingi kanye nomcamelo omncane onethezekile&ohlukanisekayo.Phakathi naleso sikhathi, kunezikhundla ezi-3 ezilungisekayo ze-backrest ezivumela abantu ukuthi bathole ukuphakama okufanelekile kokulala kalula.Isici sokugoqa sikwenza kube lula ukuphatheka futhi ukugcine.Abantu bangayiyisa noma yikuphi abafuna ukuyifaka, ngokuyivula nje ngqo, ngisho bahambe ngayo.Futhi ngemva kokugoqwa, abantu bangayigcina kalula kunoma iyiphi indawo encane.Easy and practical, imayelana.
UDRABLE ALUMINIUM UHLAKA
Ukusebenzisa ishubhu ye-aluminium yekhwalithi enhle njengohlaka, kwenza wonke umkhiqizo ube lula futhi uhlale isikhathi eside, futhi osebenza kahle ekunqandeni ukugqwala kuvumela isitulo esifanele zonke izinhlobo zezindawo zangaphandle.
Izinzuzo ezivela ekwakhiweni komumo “X” olula, abantu bangakwazi ukuwuvula noma ukuwusonga ngokushesha ngokuwuphakamisa ngokuwusebenzisa ngesandla esisodwa.Uma kucatshangelwa ukuphepha ngesikhathi sisetshenziswa, isihlalo siklanywe ngezinotshi ukuze silungise izikhundla kalula futhi ezingeke zishintshe noma zinyakaze lapho abantu belele kuso.
Indwangu Ethambile ye-TEXTILENE
Ukuze uthole ukuma okunethezekile kakhulu, ngesikhathi esifanayo ukucabangela ukuqina komkhiqizo, isihlalo sedekhi samukela isihlilingi esithambile esinokusebenza okuhle kokuhlala isikhathi eside, anti-bacteria, anti-mildew, kalula ukugcinwa nokushesha kombala.
Isethi yokuphumula ye-textile
*1.2 ~ 1.5 mm ubukhulu be-aluminium
* Izindwangu ezisezingeni eliphakeme (2*2 weaving)
* Umbala we-Textile ungenziwa ngokwezifiso.
* Izikulufu zensimbi engagqwali
*4cm umcamelo wekhanda
* Amahora angu-1200 igwebu elomile ngokushesha
U-Eva sling phumuza isihlalo
*Dlula i-SGS TEST ngo-2019
I-Eva Sling Relax Chair Display
Okwedlule: Itafula eligoqayo elingunxande lika-Eva
Olandelayo: I-Casa textile lounge
I-Naples iphumule isihlalo esinesihlalo sezinyawo